In ka badan 75 qof oo ku dhimatay diyaarad ku burburtay gudaha dalka Columbia - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldIn ka badan 75 qof oo ku dhimatay diyaarad ku burburtay gudaha dalka Columbia
November 29, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Qariidada magaalada Medellin ee dalka Columbia. [Sawirka: World Atlas]
London-(Puntland Mirror) Diyaarad ay saarnaayeen 81 qof, oo ay kamidyihiin ciyaartoy naadi kubada cagta oo Brazil ah ayaa ku burburtay dalka Columbia, sida ay wararka sheegayaan.
Booliiska Columbia ayaa sheegaya in ka badan 75 qof oo rakaabka kamid ah ay geeriyoodeen, shan qof oo kaliya ayaa ka badbaaday shilkaas, sida ay booliska sheegeen.
Diyaarada oo ahayd mid ganacsi ayaa ka timid dalka Bolivia, waxayna siday ciyaartoy katirsan kooxda kubada cagta ee Chapocoense oo Barzil ka dhisan.
Diyaaradu ayaa ku burburtay deegaan buuro ley ah oo ku yaala duleedka magaalada Medellin ee dalka Columbia.
Sawiro warbaahinta bulshada lasoo gashay ayaa u muuqda qeyb kamid ah diyaarada oo burburtay.
Qeyb kamid ah burburka diyaarada. [Sawiraka: Twitter]
Waa tuma kooxda kubada cagta ee Chapecoense?
kooxda kubada cagta ee Chapecoense. [Sawirka: AFP]
Kooxda kubada cagta ee Chapecoense ayaa la asaasay sanadkii 1973.
Sanadkii 2014-ka ayay markii kowaad kamid noqotay taarikhda horyaalka kowaad ee Barzil (Serie A), hadda waxay ku jirtay kaalinta sagaalaad.
Waxaa fadhigeedu yahay magaalada Chapeco ee gobolka Santa Catarina ee dalka Brazil.
April 1, 2017 Ugu yaraan 92 qof oo ku geeriyooday roobab daad wata oo ka da’ay dalka Columbia
February 21, 2017 Madaxweynaha dalka Azerbaijan oo xaaskiisa ka dhigay madaxweyne ku-xigeen
Ninkii geystay weerarka jaamacada gobolka Ohio ee Mareykanka oo la aqoonsaday in uu Soomaali ahaa
Muqdisho-(Puntland Mirror) Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa bayaan ay soo saareen Jimcadii ku sheegay in ay fureen baaris ku saabsan dilka looga shaki qabo gabadha Somali-Canadian-ka ahayd taasoo u dhimatay rasaas ku haleeshay [...]